Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Iindaba eziziiNdaba zokuHamba » Isitofu sokugonya sokuqala se-COVID-19 se-DNA esamkelwe e-India
Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • Iindaba zaseIndiya eziQhekezayo • iindaba • Safety • Technology • Tourism • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba ezahlukeneyo
Isitofu sokugonya, iZyCoV-D, sisebenzisa icandelo lezinto zemfuza ezisuka kwintsholongwane elinika imiyalelo njenge-DNA okanye i-RNA ukwenza iprotein ekhethekileyo amajoni omzimba ayamkelayo kwaye ayiphendule.
I-Indiya iyawamkela isitofu sokugonya esitsha se-coronavirus.
Ukuvunywa kunikezelwe ukuba kusetyenziswe kubantu abadala nakubantwana abali-12 nabadala.
I-India ijonge ukugonya bonke abantu abadala abafanelekileyo ngoDisemba, 2021.
I-DNA yokuqala edubule intsholongwane ye-COVID-19 inikwe imvume yokusebenzisa imeko engxamisekileyo yi-Central Drugs Standard Control Organisation kaRhulumente wase-India (CDSCO), nanjengoko ilizwe lisazama ukulwa le ntsholongwane isasazeka kwamanye amazwe.
The CDSCO imvume yanikezelwa kusetyenziso olungxamisekileyo kubantu abadala nakubantwana abaneminyaka eli-12 nangaphezulu.
Ukuvunywa kuya kubonelela ngokudubula kokuqala kwabo bangaphantsi kweminyaka eli-18 ubudala, kwaye kunike amandla Indiya Inkqubo yokugonya, ejolise ekuthambiseni bonke abantu abadala baseIndiya ngoDisemba, 2021.
Ngokungafaniyo namayeza okugonya e-coronavirus, afuna idosi ezimbini okanye idosi enye, iZyCoV-D ilawulwa ngeedosi ezintathu.
Umenzi weziyobisi oqhelekileyo, odweliswe njenge-Cadila Healthcare Ltd, ujonge ukwenza i-100 yezigidi ukuya kwi-120 yeedosi ze-ZyCoV-D ngonyaka kwaye sele eqalile ukugcina isitofu sokugonya.
Ugonyo lukaZydus Cadila, olwenziwe ngentsebenziswano neSebe leBiotechnology, sesibini esikhuliswe ekhaya ukufumana isigunyaziso esingxamisekileyo eIndiya emva kweChaxin yeBharat Biotech.
Umenzi weziyobisi uthe ngoJulayi isitofu sokugonya se-COVID-19 sasisebenza ngokuchasene neenguqulelo ezintsha ze-coronavirus, ngakumbi okwahlukileyo kwe-Delta, kwaye ukuba ukudubula kulawulwa kusetyenziswa isixhobo sokufaka inaliti ngaphandle kweesirinji zesiko.
Ifemu ifake isicelo sokugunyaziswa kweZyCoV-D nge-1 kaJulayi, ngokusekwe kwinqanaba lokusebenza kweepesenti ezingama-66.6 kuvavanyo lwasemva kwexesha lwamavolontiya angaphezu kwama-28,000 kwilizwe liphela.